Obama iyo Bush oo sheegay in ay kala qaybsanaan wayn ka jirto Maraykanka - BBC News Somali
Obama iyo Bush oo sheegay in ay kala qaybsanaan wayn ka jirto Maraykanka
Lahaanshaha sawirka GETTY IMAGES/REUTERS
Image caption Barack Obama iyo George W Bush midkoodna ma soo qaadin magaca Trump
Barack Obama iyo George W Bush oo horay madaxweyneyaal u soo noqday ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka Maraykanka, arrintaas oo loo arko dhaliil maldahan oo ka dhan ah hogaaminta madaxweyne Donald Trump.
Obama ayaa ku baaqay in dadka Maraykanku ay diidan siyaasadda "kala qaybinta" iyo "cabsida" Bush-na wuxuu soo bandhigay eedkale oo ah in nolosha dadka lagu hayo "xoogsheegasho iyo yasid"
Haddaladaas ayay meelo kala duwan ka jeediyeen, midkoodnanase ma soo hadal qaadin magaca madaxweyne Trump.
Trump oo aad u naqdiyijiray madaxweynihii uu badalay ayaan wali arrintan ka hadlin.
Madaxweyneyaashii hore ayaa caadiyan ka xishooyin jiray in ay meel fagaare ah wax kaga sheegaan madaxda badasha Obama markii uu xafiiska ka tagayayna wuxuu sheegay in ixtiraaankaas uu sii wadi doona inta uu Trump xilka hayo sidii uu sameeyay George W Bush oo isaga ka sii horreeyay.
Trump oo casuumay Obama walaalkiis
Donald Trump oo Obama eedeeyay
Agaasimaha FBI-da oo "beeniyay" eeda Trump ee Obama
Laakiin aamusnaanta ayuu joojiyay tan iyo markii ay soo baxday dadaallada uu Trump ku doonayo in uu ku nasakho oo ku badalo daryeelka caafimaadka ee Obamacare iyo waliba mamnuucitaankii "Muslimiinta" ee muranka badan dhaliyay iyo isaga bixiddii heshiiskii cimilada ee Paris.
Obama: Trump ha xoojiyo midnimada
15 Nofembar 2016
Obama oo dhaliilay amarka Trump
31 Jannaayo 2017